ओम अस्पतालमा पत्थरीको शल्यक्रिया गर्दा सानो आन्द्रा काटियो, बिरामीको मृत्यु « Janata Times
उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएपछि चावहिलको ओम अस्पतालमा तनाव उत्पन्न भएको छ । पित्तथैलीमा भएको पत्थरीको शल्यक्रिया गर्दा ५० वर्षीया रामप्यारी थापामगरको मृत्यु भएको हो । उहाँको गत शुक्रबार पित्तथैलीको पत्थरीको शल्यक्रिया गरिएको थियो ।
शल्यक्रियापछि स्वास्थ्यमा सुधार आउनुको सट्टा झन्झन् जटिल बन्दै गएपछि शल्यक्रिया गरेको दुई दिन अर्थात गएको आईतबार सानो आन्द्रा पनि छेडिएको र त्यो नटाल्दा शरीरभर संक्रमण फैलिएर मृत्यु भएको बिरामीका आफन्तहरुले बताएका छन् ।
त्यसपछि स्वास्थ्यमा सुधार आउनुको सट्टा शनिबार रामप्यारीको ब्लड पेसर लो हुने उहाँलाई श्वास फेर्न गाह्रो हुने समस्या भयो । त्यसपछि अस्पतालले सबै स्वास्थ्य परीक्षण गरियो र आइतबार सिटी स्क्यान सम्म गरियो । सिटी स्क्यानबाट पनि समस्या पत्ता नलागेपछि भिडियो एक्स–रे बाट निमुनिया होकी भन्ने आशंका भयो । निमोनिया भएको भए निको हुन्छ भन्ने सोचमा हामी थियौँ ।
पछि डाक्टरले आफन्तहरुलाई भित्र बोलाएर आन्द्रामा इन्जुरी रैछ भन्ने कुरा गरे अर्थात पत्थरीको शल्यक्रिया गरेको समयमा सानो आन्द्रा छेडे पनि नटाली पेटमा टाका लगाएको रैछ । तुरुन्त शल्यक्रिया गर्नुपर्छ भनेपछि आईतबार फेरि शल्यक्रिया गरियो । शल्यक्रिया सकेपछि डा. रविन कोइरालाले डेढ मिटरभन्दा बढी आन्द्रा काम नलाग्ने भएको रैछ त्यो आन्द्रा मैले काटेर फालिदिए भने ।
अहिले आन्द्रा नपुगेको कारणले बिरामीको आन्द्रा जोड्ने समय पनि पाईन मलद्धारमा जाने आन्द्रा मैले पेटबाट बाहिर निकाली दिएको छु डा. कोइरालाले हामीलाई भने । त्यसलगतै आईतबारनै बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा लगियो । सोमबार पनि अलि ठिक हुँदैछ । मंगलबार अलि स्वास्थ्यमा समस्या आयो भनेर भन्दा भन्दै आज बिहान ७ बज्न २ देखि ३ मिनेट बाँकी हुँदा बिरामीको मृत्यु भयो ।
उपचार गर्न ल्याएको रामप्यारीको यसरी निधन भएपछि अहिले ओम अस्पतालमा आफन्तको घुँईचो लागेको छ । अस्पताल परिसरमा प्रहरी खटाइएको छ । मृतक रामप्यारीको ज्वाई खड्ग श्रेष्ठका अनुसार अहिलेसम्म पनि अस्पताल प्रशासनसँग छलफल नभएको बताउनुभयो। अस्पतालबाट गल्ती भएको भन्ने कुराको कुनै पनि प्रतिक्रिया नजनाएको आफन्तहरुको भनाई छ ।
अस्पतालले गल्ती स्वीकारेन
अस्पतालले भने बिरामीको अवस्था पहिले नै खराब भएको बताएको छ । ‘महिलाको पहिला नै पाठेघरको तीन पटक अप्रेशन भैसकेको रहेछ । अप्रेशन गर्नुभन्दा पहिला नै आफन्तलाई जोखिम हुन्छ भनेर भनेका थियौँ’, अस्पतालका निर्देशक केपी देवकोटाले बताउनुभयो ।
शनिबार राति बिरामीलाई गाह्रो भएपछि आईसीयूमा सारिएको बताउँदै निर्देशक देवकोटाले भन्नुभयो, ‘आइतबार टाँका खोलेर हेर्दा फोहोर वस्तु निस्किएपछि आन्द्रामा इन्फेक्सन भएको रहेछ । त्यसपछि आन्द्रालाई काटेर जोड्न सकिन्छ भनेर अप्रेसन गरिएको हो । त्यसपछि पनि बिरामीको अवस्थामा सुधार आएन ।’